थापा ज्यु, बिद्वान भेला भएर बैचारिक बहस गरेर देश बिकासमा लाग्ने कि भाले-पोथी बन्दै बस्ने ?::Nepal's No.1 Genuine Online News Portal
थापा ज्यु, बिद्वान भेला भएर बैचारिक बहस गरेर देश बिकासमा लाग्ने कि भाले-पोथी बन्दै बस्ने ?
नरेन्द्र मोदिको नेपाल भ्रमणमा देशको हित बिपरित हुनु हुन्न, तर नेपाली काग्रेस ले ५० बर्ष शासन गर्दा १४-१५ पटक सत्ता जिम्मा लिदा देशमा १९-२० घन्टा लोडसेडिङ भयो भन्न हामीले पाउने कि नपाउने ?
सरकारमा हुदा पोथी भएर भारतको गुणगान गाउने अनि प्रतीक्षामा बस्दा भाले भएर भारत विरुद्ध खनिने यस्लाई प्रतिपक्षमा बस्नुको पीडा भन्न हामीले पाउने कि ! नपाउने थापा ज्यु ..?
गर्जने बादलले बर्षा दिदैन रे तपाइँ पनि यस्तै बादल हो गर्जन सक्नुहुन्छ तर परिणाम निकाल्न सक्न्नुहुन्न । हिजो घैटे मारिदा चार वटा कागज हातमा बोकेर सरकारले मानवधिकार हनन गर्‍यो भन्दै मानव अधिकार धाउने तपाई नै होइन र ? तपाई पनि हड्डी नभएको गड्यालो जस्तै हो हिलोमा जता पनि बटारिने। भ्रमात्मक भाषण दिएर भन्दा पनि बारीमा साग उमारेर आत्मनिर्भर बनाउन सीकाउनु होस् । सबैले सलाम गर्नेछन् । यतिका पढे लेखेका बिद्वान नेताहरु सबै पार्टि जम्मा भएर बैचारिक बहस गरेर देश बिकासमा जुट्नु पर्ने होइन र ? देशलाई कसरी निकास दिनु पर्ने भन्ने नारा सदनमा कहिले उठाउनु हुन्छ ।
राजाले भारत गुहारे रे तपाइको पार्टीको नेता हटाउन, बि पि प्रति सम्मान छ तर भारतमै स्थापना भएकाे पार्टी कस्तो हो भनेर आम नेपाली अनबिग्य छैनन् । बाँकि रह्याे अाेलिकाे कुराे माेदि अाउदाँ राष्ट्रबादिहरुको घुडाँमा भ्वाङ पर्याे हाेला, तर तपाइहरु त घुँडा टेकेर के-के भयाे हामीले बिर्सेकाे छैन, यसरि चर्काे भाषण सुनेर दङ्ग नपर्न सबैलाई अाग्रह प्रतिपक्षमा बसेर ठुला कुरा जस्ले पनि गर्छ सामान्य हाे । हामीले नचिनेकाे हैन बिदेश नीतिका कुरा गर्नु भयो बिदेश भनेकाे भारत बाहेक अरू नदेख्ने काङ्ग्रेस नै होइन र ? अाेलीले पाकिस्तान सम्मका प्र म भित्र्याउन त भ्याए, राष्ट्रिय बिदेश नीति बनाउने कुरा सान्दर्भिक छ ।
तपाईलाई देशप्रेम प्रती त्यति नै ओतप्रोत छ भने राष्ट्रियता माथी आच आउने कुरा गर्ने लालबाबु राउतको बिरोध गर्न सदनमा किन कन्चुस्याइ गर्नु भयो । हिजो तराइ डुब्दा कोसीका ढोका खोल्न्नु पर्छ भनेर किन बिरोध गर्न सक्नु भएन। सत्तामा हुदा शाहस पूर्वक चीनबाट रेल र तेल ल्याउनु पर्छ भनेर किन भन्न सक्न्नु हुन्न ?
भारतका नेताहरुसँग भेट गरेर बुझे, नाकाबन्दि हाम्रै कारणले भएको रहेछ भारतको यसमा कुनै भूमिका छैन- भन्ने काङ्रेस नेता दिप कुमार उपाध्याय (तत्कालिन राजदुत) होइनन् र ? भारतीय सत्ता नाकाबन्दिको निम्ती जती अपराधी हो त्यस भन्दा ठुलो जिम्मेबार अपराधी तपाइको पार्टी पनि त हो। अप्रत्यक्ष रुपमा उसको सहयोग र समर्थन थियो यसमा । नाकाबन्दी लाएर ४६ सालमा राजा बिरेन्द्रलाई घुँडा टेकाए झै ओलीलाइ टेकाउन चाहन्थे। यिनको हर्कत सम्झिनुस त त्यसबेला नाकाबन्दिका बिषय छोडेर संसदमा अनेक तमासा आयल निगमको जिएम काङ्रेस कार्यकर्ता गोपाल खड्काको मिलोमतोमा इन्धन तस्करी, पुननीर्माण प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्न नपाएर तान्डव, संबिधान संसोधन गर भन्दै संसद अवरुद्ध। मुलुक नाकाबन्दी बेहोर्दै थियो, नेपाली काङ्ग्रेस तमाशा गर्दै रह्यौ, मोदिलाई नाकमा नथ्थी लाएपछी अहिले नाकाबन्दी सम्झनु पोहोर मरिन सासू अहिले आयो आसु भने जस्तो भएनर गगन जि ?
सधैंभरि अरूले गरेका कामहरूको जस लिन खोजेर कसरी हुन्छ काङ्ग्रेसको बिकास। अब त बेला आयो बिकास र जनताको भावना बूझेर कामगर्ने बेला।
नरेन्द्र मोदिको नेपाल भ्रमणमा देशको हित बिपरित हुनु हुन्न, तर नेपाली काग्रेस ले ५० बर्ष शासन गर्दा १४-१५ पटक सत्ता जिम्मा लिदा देशमा १९-२० घन्टा लोडसेडिङ भयो भन्न हामीले पाउने कि नपाउने ? त्येति बेला आफ्नै पार्टिका अभिभावक विरुद्ध किन बोल्नु भएन कि बगावत नगरेको ? गलतलाई सधै गलत भन्नू पर्छ कि पर्दैन ? हो अहिले को भ्रमण मा सेना ल्याउनु गलत थियो म मान्छु तर अहिलेको सरकारको काम हेर्न अझै समय नकुरी पत्तो लाग्दैन। विपक्षीको भुमिकामा राम्रो प्रस्तुत हुनु भएको हो मान्नु पर्छ तर कुर्सीमा बस्दा चै किन तपाइँका पार्टीका नेताहरु एकापट्टि मात्र ढल्केको हुन ? छिमेकी लाई बरावरीमा राख्नु पर्छ तर हामीले बिगत मा के गरियो त्यसको असर अहिलेको सरकारमा पनि परेको हो। यो दोस आत्मसात गरेर आफ्नै अभिभावकलाई दिनुस। अहिलेको सरकारलाई खबरदारी गरेकोमा सलाम छ हामीले यो कुरामा साथ् दिने छौ तर आफ्नो घर पहिले सुधार्न पर्छ अरुको घरको धुरिमा काग देख्नेले आफ्नु घर भित्रको कागको गुड र बचरो नदेख्नुलाई हामीले गलत भन्ने कि नभन्ने ? तपाईको अडान जायज हो तर पहिले आफ्नो घर सफा गर्नुस । सफा र राम्रो बस्तुलाई जस्ले पनि हातमा लिने कोसिस गर्छ यो त बिगतका भ्रमणबाट नै प्रमाणित भै सक्यो।
काङ्गग्रेसले बिकास र पूर्बधारहरू नारा लिएर सदनमा कहिले आऊने हो अथवा अरूलाइ गालि गरेर मात्र अबको राजनिती चल्ने वाला छैन।साथै काङ्ग्रेसको शासनकालमा नेपालीले १८ घन्टाको लोडसेडिङ तालिका दैनिक अपडेट गराउनू परेको कथाहरू सदनमा बाचन गर्नु होला । सधैंभरि अरूले गरेका कामहरूको जस लिन खोजेर कसरी हुन्छ काङ्ग्रेसको बिकास। अब त बेला आयो बिकास र जनताको भावना बूझेर कामगर्ने बेला।
हिजो तपाइँको सरकार हुँदा लगतै नाकाबंदी गरेको थियो भारतले तर टुडिखेलबाट तपाइँले भनेको कुरा पनि स्मरण गर्नुहोस भारतले नाकाबंदी गरेको छैन जो भारतको बिरोध गर्छ सबै भेंडा हुन भनेको कुरा सबै जनतालाई अवगत नै छ, खबरदारी अवस्य गर्नु पर्छ तर राजनीति भाषामा होइन। जनताले बिकास र निकास चाहन्छ त्यसैले जनताको मन जित्नको लागि अब भाषण होइन प्रतिपक्षमा रहेरै भएपनी निकासको बाटो देखाउनु भयो भने जनता को मन अवस्य जित्नु हुनेछ ।
यो निर्लज्ज सरकार माथी धारिलो प्रहार गर्न सक्ने विपक्ष दलको एकमात्र जिउदो नेता तपाई नै हो तर अस्ति त्यो “नाकाबन्दी” हुँदा पनि यसरी नै जनताको सामु खुलेर यो “नाकाबन्दी” हो भन्ने शाहस भएको भए आज तपाइ र तपाइको पार्टीको यो हविगत हुदैनथ्यो कि ! आयातित नागरिक देशको प्रमुख, काम काजको भाषा हिन्दी हुनु पर्छ भन्नेहरु प्रती तपाईको बैचारिक बिचार केही देखिन । तपाइ र तपाइको पार्टीले बिकास, निकास र पुर्बधारहरुको नारा लिएर देशको मुल कहिले फुटाउने गगन जि ? कि अरुले गरेको खेतीको फल मात्र खाने बानी बसाल्ने हो र ?
हिजो देउवा दाजुको साहारा लिएर नाकाबन्दिको उच्चारण गर्न सम्म हिचकिचाउने गगन थापाहरु अब निर्भीक ढंगले राष्ट्रबादी बटन लाइनमा आइपुग्नु निकै सकारात्मक कुरा हो तर हिजो नाकाबन्दीको बेला ससक्त रुपमा जुध्न सक्ने नेतृत्व चाहिएको थियो तर त्यो काम त अरु कसैले गरि सकेका छन् । अब सहज समयमा नै राष्ट्रवादको भारी बोक्न सकिए असल नेता कहलाउन सकिएला नत्र थाकेर विश्राम लिनु पर्ला चेतना भया ।
र अन्त्यमा थला परेको कंग्रेसबाट सेलिब्रेटि बन्न मात्र नखोज्नु होला । जनताको भावना बुझ्नु होला, शुभकामना छ तपाइलाई आगामी दिनको लागी ।